श्रीमानको मृत्युपछि ८० परपुरुषसँग लसपस, भन्छिन्ः यसमा मलाई गर्व छ ! - Gokarna News from Nepal
श्रीमानको मृत्युपछि ८० परपुरुषसँग लसपस, भन्छिन्ः यसमा मलाई गर्व छ !
युरोप– एक जना डाक्टरकी विधवा महिलाले श्रीमानको मृत्युपश्चात् ८० जना विवाहित पुरुषहरुसँग ‘लसपस’ रहेको खुलासा गरेकी छिन् । ४३ वर्षकी लुइस भान डेर भेल्डेले हरेक दिन आफ्नो अन्तिम दिनजसरी दर्जनौँ व्यक्तिहरुसँग सम्बन्ध राखेको खुलासा गरेकी हुन् ।
– मेट्रो युकेबाट भावानुदित ।
८२ वर्षे छोराको हेरचाह गर्दै सय वर्षे आमा
१८ हजार वर्षदेखि हिउँमा पुरिएको ‘कुकुर’ लाई देखेर वैज्ञानिक परे चकित
स्कुले बालकले पठाए प्रिन्सिपललाई ‘प्रेमपत्र’, प्रिन्सिपलमाथि कडा कारवाहीको माग